တရုတ်နိုင်ငံရှိ အဓိကမြို့ကြီးတွင် ဆင်အုပ်စုများ ဆက်လက်လှည့်လည်သွားလာနေ - Xinhua News Agency
ဂတ်စ်ဓာတ်ငွေ့ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားပြီးနောက် ကယ်ဆယ်ရေးလုပ်ငန်းများ အားလုံး အစွမ်းကုန် လုပ်ဆောင်ရန် သမ္မတရှီပြောကြား
ကူမင်း၊ ဇွန် ၆ ရက် (ဆင်ဟွာ)
ကောင်ရေ ၁၅ ကောင်ရှိသော အာရှတောဆင်ရိုင်းအုပ်စုသည် တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ကူမင်းမြို့ပြင်ပတွင် လှည့်လည်သွားလာနေဆဲဖြစ်ကြောင်း ဒေသခံအာဏာပိုင်များက ဇွန် ၆ ရက်၌ ပြောကြားခဲ့သည်။အဆိုပါဆင်အုပ်စုသည် ကူမင်းမြို့ ကျင်းနင်ခရိုင်၊ Xiyang Yi ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသသို့ ရောက်ရှိရန် ဇွန် ၅ ရက် မွန်းလွဲ ၃:၁၀ နာရီအထိ ၂၄ နာရီအတွင်း နောက်ထပ် ၁၂.၁ ကီလိုမီတာ ခရီးနှင်ခဲ့ကြောင်း ဆင်များသွားရာလမ်းကြောင်း ခြေရာခံခြင်းဌာနက ပြောခဲ့သည်။
တရုတ်နိုင်ငံ အနောက်တောင်ပိုင်း ယူနန်ပြည်နယ် မြို့တော် ကူမင်းမြို့ ကျင်းနင်ခရိုင်တွင် လှည့်လည်သွားလာနေသည့် ဆင်အုပ်အတွက် သောက်ရေပံ့ပိုးပေးနေသော မီးသတ်ကားအား တွေ့ရစဉ် (ဓာတ်ပုံ- On-site command center for the herd’s migration/Handout via Xinhua)
အဆိုပါ ဌာနသည် ဇွန် ၅ ရက်က ဆင်အုပ်စုကို ခြေရာခံရန် ဒရုန်း ၁၄ စင်းဖြင့် မောင်းနှင်ပျံသန်းခဲ့ကြောင်း၊ လူပေါင်း ၅၁၀ နှင့် ယာဉ် ၁၁၀ ကျော် စုစည်းကာ လမ်းများကို ပိတ်လျက် အနောက်တောင်ဘက်ဆီသို့ ဦးတည်သွားရန် လမ်းကြောင်းပေးခဲ့ကြောင်းသိရသည်။
၎င်းဆင်များသည် Xishuangbanna Dai ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစီရင်စုရှိ ၎င်းတို့နေထိုင်ရာ သစ်တောမှ ဇွန် ၂ ရက်က ယူနန်ပြည်နယ် မြို့တော် ကူမင်းမြို့သို့ မရောက်မီ ကီလိုမီတာ ၅၀၀ ခန့် ခရီးနှင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
နောက်ဆုံးသန်ခေါင်းစာရင်း ကောက်ယူထားချက်အရ ကူမင်းမြို့တွင် လူဦးရေ ၈.၄၆ သန်း နေထိုင်လျက်ရှိကြောင်း သိရသည်။
အာဏာပိုင်များက တစ်လခန့်အတွင်း ဆင်အုပ်စုကို လိုက်ပါစောင့်ရှောက်ရန် ရဲတပ်ဖွဲ့အား စေလွှတ်ထားခဲ့ပြီး ၎င်းတို့ဖြတ်သန်းသွားလာရ အဆင်ပြေနိုင်စေရန် လမ်းလွှဲ ပေးခဲ့ခြင်းနှင့်လူနေထူထပ်သောဧရိယာများသို့ ဝင်ရောက်ခြင်းကို ရှောင်ရှားနိုင်စေရန် အစားအစာများ အသုံးပြုခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
အာရှဆင်များသည် တရုတ်နိုင်ငံ၌ နိုင်ငံအဆင့်-အေ (A-level) ကာကွယ်စောင့်ရှောက်မှုအောက်တွင် ထားရှိပြီး အများအားဖြင့် ၎င်းဆင်များကို ယူနန်ပြည်နယ်၌ တွေ့ရှိနိုင်သည်။ အဆင့်မြင့် ကာကွယ်ထားခြင်းကြောင့် ယင်းပြည်နယ်ရှိ တောရိုင်းဆင်အရေအတွက်မှာ ၃၀၀ ခန့် တိုးလာခဲ့ပြီး ၁၉၈၀ ပြည့်လွန်နှစ်များက ၁၉၃ ကောင်ရှိရာမှ မြင့်တက်လာခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ (Xinhua)
KUNMING, June6(Xinhua) — A herd of 15 wild Asian elephants continue to linger in the outskirts of the southwestern Chinese city of Kunming, local authorities said Sunday.
The herd trekked another 12.1 km in 24 hours as of 3:10 p.m. Saturday to reach Xiyang Yi Autonomous Township in Jinning District of Kunming, said the on-site command center tracking the elephants.
The command on Saturday flew 14 drones to track the herd and mobilized 510 people and over 110 vehicles to block roads and guide the migration toward the southwest.
The elephants traveled approximately 500 km from their forest home in the Xishuangbanna Dai Autonomous Prefecture before reaching Kunming, the provincial capital of Yunnan, on Wednesday.
Asian elephants are under A-level state protection in China, where they are mostly found in Yunnan. Thanks to enhanced protection, the wild elephant population in the province has grown to about 300, up from 193 in the 1980s. ■
1- Photo taken byadrone shows the herd wandering in the Jinning District of Kunming, capital of southwest China’s Yunnan Province, on June 4, 2021. (On-site command center for the herd’s migration/Handout via Xinhua)
2- Photo showsafire engine providing drinking water for the herd in the Jinning District of Kunming, capital of southwest China’s Yunnan Province, on June 3, 2021. (On-site command center for the herd’s migration/Handout via Xinhua)